နယူးယောက် ရဲ တပ်ဖွဲ့ရဲ့လှို့ ဝှက်ထောက်လှမ်းမှု တွေ ကို ဖော်ထုတ် တဲ့ သတင်းစာ တွေ ပူလစ်ဇာ ဆုရ | The FNG
နယူးယောက် ရဲ တပ်ဖွဲ့ရဲ့လှို့ ဝှက်ထောက်လှမ်းမှု တွေ ကို ဖော်ထုတ် တဲ့ သတင်းစာ တွေ ပူလစ်ဇာ ဆုရ
April 17, 2012 · by 21 South News	· in ပြည်ပသတင်း, News.	·
FNGသတင်းမီဒီယာ နဲ့စာပေ နယ်ပယ် ထူးချွန်ထင်ရှား သူ တွေ အပါအ၀င် ဂီတ ပညာရှင် တွေ နဲ့ 
သတင်းဌာန ကို နှစ် စဉ် ချီးမြှင့် တဲ့ ပူလစ်ဇာ ဆုပေး ပွဲ အခမ်းအနား ကို ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့ ရာမှာ
New York Times သတင်းစာ က ဆုနှစ် ခု ရရှိ သွား ပြီး ၊ Matt Apuzzo, Adam Goldman,
Eileen Sullivan and Chris Hawley တို့ ဟာ AP သတင်းဌာန အတွက် သူတို့တွေ စုံစမ်း
ဖော်ထုတ် ရေးသား ခဲ့ တဲ့ သတင်း ဆောင်း ပါး ရှည် တစ် ခုဖြစ်တဲ့ မွတ်ဆလင် လူမျိုး တွေ ကို
နယူးယောက် ပုလိပ် ဌာန က လှို့ ဝှက် ထောက်လှမ်း စောင့် ကြည့် နေတာနဲ့ပတ်သက် ပြီး ဖော်
ထုတ် ရေးသား ခဲ့တာ ကြောင့် ပူလစ် ဇာ ဆု ရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။
Matt Apuzzo ဟာ သူဦးစီး ထောက်လှမ်း တဲ့ သတင်းတွေ မှာ NYPD ရဲတွေ ဟာ ဘယ်လိုထောက်လှမ်း
မှု တွေ ပြုခဲ့ တယ် ဆို တာ ကို လဲ တိကျစွာ ရေး သား ခဲ့ ပါတယ်။
AP သတင်းဌာန ဟာ ပူလစ်ဇာ ဆု ၅၀ ကျော် ရရှိ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
New York Times သတင်းစာ က ရှင်းလင်း ဖော်ပြ သတင်း ရေး သား မှု နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်း
အစီရင်ခံ မှု နှစ်ခု ဖြင့် ပူလစ်ဇာဆုရရှိခဲ့ ပါတယ်။ နယူးယောက် တိုင်း(မ) ရဲ့Explanatory reporting
အတွက် သတင်း ထောက် David Kocieniewski က အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင်း က ချမ်းသာကြွယ်
၀သူ တွေ အခွန် ရှောင် နေတဲ့ ကိစ္စ တွေ နဲ့အခွန်ပေးဆောင် ဖို့လက်တစ်လုံးခြား လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေ
ကို ရေးသား ခဲ့ လို့ ဆုရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။
Full List of Pulitzer Prize Winner (Columbia University)
နယူးယောက် တိုင်း(မ) သတင်းစာ က ပဲ သတင်း ဆောင်း ပါရှင် Jeffery Gettleman က အာဖရိက
တိုက် မှ ကြုံနေရတဲ့ လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ တွေ ၊ ရာဇ၀တ်မှု ၊ အမျိုးသမီး တွေ အရေး နဲ့ပင်
လယ် ဓားပြ ပြဿနာ တွေ ရဲ့အရင်း အခံ အကြောင်း အရင်း တွေ ကို ရေးသား မှု ကြောင့် ဆုရရှိ ခဲ့
ရုပ်ရှင် ဝေဖန် ရေး နဲ့ပတ်သက် တဲ့ ဆု ကို Boston Globe သတင်းစာ က ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေး ဆရာ
Wesley Morris က သတင်းစာမှာ ပါရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင် ဝေဖန် ရေး ဆောင်း ပါး တွေ နဲ့ရရှိ သွား
အာဘော်ရေးရာ ကာတွန်း ထူးချွန်မှု ကို Politico အင်တာနက် သတင်းမှ ကာတွန်းဆရာ
Matt Wuerker က အီဂျစ် ပြည်သူ တွေ ရဲ့အုံကြွမှု မှာ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီေ၀၀ါးမှု ဖြစ်
နေတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရ ကို သရုပ် ဖော်ထား တဲ့ ကာတွန်း နဲ့ရရှိ ပါတယ်။
အမျိုးသား သတင်း ဆုကို တော့ သတင်း တင်ဆက်မှု ပုံစံ မှာ နာမည် ကျော်ကြား တဲ့ Hufftinon
Post သတင်းဌာန သတင်းထောက် David Wood က အီရတ် နဲ့အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံ တွေ က
ပြန်လာတဲ့ စစ်ပြန် အမေရိကန် တွေ ရင် ဆိုင် ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အခက် အခဲ တွေ ကို Beyond the Battlefield
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ဖော်ထုတ် ရေးသား မှု ကြောင့် ဆုရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။
ပူလစ် ဇာ ဆုတွေ ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ် က သတင်းစာဆရာ များ
ဘုတ် အဖွဲ့ က နေ နှစ် စဉ် ပေး အပ် ချီးမြှင့် တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ပူလစ် ဇာ ဆု ကို ဟန်ဂေရီ – အမေရိကန်
နွယ် ဖွား သတင်း စာ ဆရာ Joseph Pulitzer က ၁၉၁၇ ခုနှစ် မှ စတင် ချီးမြင့် ခဲ့ ပါတယ်။ သူ ပိုင်
တဲ့ ငွေကြေး အချို့ကို ၁၉၁၅ ခုနှစ် မှာ နယူးယောက် ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ် ကို လှုဒါန်းခဲ့ ပြီး ကမ္ဘာ့ 
ပထမ ဦးဆုံး သတင်းစာ ပညာ သင်တန်း ကျောင်း ဖွင့် လှစ် နိုင်ဖို့စတင်ခဲ့ သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ကြားဖြတ် သတင်း ဓာတ် ပုံ အတွက် ဆု
Awarded to Massoud Hossaini of Agence France-Presse for his heartbreaking
image ofagirl crying in fear afterasuicide bomber’s attack atacrowded shrine in Kabul.
The Pulitzer Prize-winning photograph by Massoud Hossaini of Agence France-Presse.
Photograph: Massoud Hossaini/ AFP/EPA
သတင်း ဆောင်း ပါး ဓာတ်ပုံ အတွက် ဆု
Awarded to Craig F Walker of The Denver Post, for his compassionate chronicle
of an honorably discharged veteran, home from Iraq and struggling withasevere
case of post-traumatic stress, images that enable viewers to better graspanational issue.
Brian Scott Ostrom looks over his military service records and weeps after being
told his apartment application had been turned down, part of Denver Post
photographerCraig F Walker’s photo story that won the 2012 Pulitzer Prize for
feature photography Photograph: Handout/Reuters
ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲ ကာလ အတွင်း က ပူလစ်ဇာ ဆို ရရှိခဲ့ သည့် ကမ္ဘာ ကျော်ဓာတ်ပုံ
Pulitzer Prize, New Media,
← ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် (၁၆.၄.၂၀၁၂) မှ (၂၂.၄.၂၀၁၂) ထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
အာဖရိက မိုက်ခရိုဆောဖ် အကြီးအကဲ ကို မာလီ ကြားဖြတ် အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ခန့်→
One response to “နယူးယောက် ရဲ တပ်ဖွဲ့ရဲ့လှို့ ဝှက်ထောက်လှမ်းမှု တွေ ကို ဖော်ထုတ် တဲ့ သတင်းစာ တွေ ပူလစ်ဇာ ဆုရ”
Kristen April 17, 2012 at 1:36 pm · ·
“AP သတင်းဌာန အတွက် သူတို့တွေ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ရေးသား ခဲ့ တဲ့ သတင်း ဆောင်း ပါး ရှည် တစ် ခုဖြစ်တဲ့ မွတ်ဆလင် လူမျိုး တွေ ကိုနယူးယောက် ပုလိပ် ဌာန က လှို့ ဝှက် ထောက်လှမ်း စောင့် ကြည့် နေတာနဲ့ပတ်သက် ပီး ဖော်ထုတ် ရေးသား ခဲ့တာ ကြောင့် ပူလစ် ဇာ ဆု ရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။”
ဆိုတာမှာ မွတ်စလင်ကလူမျိုးဆိုတာထက် (A Muslim, also spelled Moslem, is an adherent of Islam) အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ လူမှန်သမျှကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ အင်ဒီးယန်းမွတ်စလင်၊ တရုတ်မွတ်စလင်၊ အီရန်မွတ်စလင်၊ ဂျပန်မွတ်စလင် စသည်ဖြင့်ပါ။